दृष्टिकोण Archives - NepalDut NepalDut
स्याङ्जा फेदीखोलामा घनश्याम सुवेदी
राज्य पुनर्संरचना हुँदै थियो ।विभिन्न खाकाहरु तयार हुँदै थिए ।पालिकामा फेदीखोलाको नाम हटेर आधीखोला सँग जोडिएर आयो ।स्याङ्जा फेदीखोलाका जनताहरु निराश भए ।जनताहरुलाई लाग्यो हरेक पालिकाका काम गर्न आधीखोला जानू पर्ने भयो । निराशाका काला बादलहरु मडारिदै थिए । फेदी खोलेहरु हतास मनस्थितिमा थिए ।आधीखोला नै ठिक भनेर धमीलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरु पनि थिए । जनतामा छाएको निराशाको कालो बादल देखेर घनश्याम सुबेदीको मनमा विद्रोहको ज्वाला निस्कियो । फेदीखोला… पुरा पढौ
लेनिन जयन्ती: उनका सिद्धान्त लागू गर्ने प्रण गरौं
सन् १९१७ मा भएको रुसी क्रान्ति अधिकांशलाई थाहै छ । त्यही क्रान्तिको नेतृत्व कर्ता हुन् ‘भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ’ अर्थात् लेनिन । भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ उनको बाल्यकालको नाम हो । लेलिनपछि राखिएको नाम हो । १९१७ मा सम्पन्न भएको रुसी आन्दोलन मार्क्सवादमा आधारित भई गरिएको थियो । त्यही क्रान्ति नै अहिले चलेको विश्वभरको मार्क्सवादी आन्दोलनको प्रेरक घटना र पथप्रदर्शक बनेको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिबसको रुपमा आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा… पुरा पढौ
भुटेको बिउ र ओखरपाङ्ग्रे नेताको भाषण
प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाईन डे) को अघिल्लो दिन एक जना बुढो मानिस उपहार पसलमा आयो र दुई दर्जन शुभकामना कार्ड किन्यो। त्यो मान्छेले प्रतेक कार्डमा "हेलो प्रिय, सञ्चै छौ? मलाई चिन्यौ नि! तिमीलाई मैले ज्यादै मिस गरेको छु। तीम्रो सम्झनाले आँफैमा काउकुती लागेर आउछ। भोली प्रणय दिवसको दिन भेटौ न है।" उक्रान्ति धेनु गर्ने बेलाको बुढाले झन्डै दुई दर्जन कार्ड्मा त्यस्तो लेखेको देखेर पसले छक्क पर्‍यो र सोध्यो- कसलाई लेख्नु भएको… पुरा पढौ
कवितामा पोखरा: अलिकति काठमाडौं, सहरी विकास र पोखरा
मैले बि. सं. २०३४ सालमा पोखरालाई चिनेको हुँ र पोखरा मलाई आफन्त लाग्छ । म विहान उठेर माछापुच्छे«लाई हेर्थे र लाग्थ्यो विश्वकै सुन्दर सक्कले ढाकाको टोपी पहिरेको छु मैले आफ्नो शिरमा, अनि खुशीले छचल्किन्थे म। रातो लालीले लिपिएको, बैंस चढ्दै गरेको आफ्नो घोर्ले अनुहार हेर्न खोज्थें, फेवातालमा। जहाँ म स्निग्ध, जाज्वल्यमान र अग्लो माछापुच्छे«को प्रतिविम्ब देख्थें र आफ्नो अनुहार हेर्नै विर्सिन्थें– लाग्थ्यो माछापुच्छ्रे नै मै हुँ अर्थात् म नै पोखरा।… पुरा पढौ
युक्रेन, जेलेन्स्की र एमसिसी
जारकालीन समयमा यूक्रेन रुसी साम्राज्यअन्तर्गत थियो । जब लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा महान् अक्टोवर समाजवादी क्रान्ति भयो कम्युनिष्ट सरकारले ‘आत्म निणर्यको अधिकार’ प्रदान गर्‍यो । जारले उपनिवेश बनाएका राष्ट्रहरुलाई उनीहरु एउटा ठूलो राष्ट्र सोभियत सङ्घमै बस्ने कि अलग राष्ट्रका रुपमा रहने रु भनी रोज्न दियो । त्यतिखेर पोल्याण्ड, चेकोस्लाभाकिया जस्ता देशहरु स्वतन्त्र रुपमा रहन चाहे र तिनीहरुलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरियो । तर यूक्रेनी जनमत सोभियत सङ्ममै विशाल राष्ट्रका रुपमा… पुरा पढौ
दासता स्वीकार्ने कसैलाई पनि जनताले माफी दिने छैनन्
१. यो परियोजना धेरै पहिलेदेखि नेपालमा प्रवेश गराइएको रहेछ । यसो गर्नमा वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी सबै खालका सरकारको संलग्नता देखिन्छ । आज यति धेरै चासो र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सवालमा कुनै दल वा सरकारले यसलाई किन देशमा ल्याउन खोजिएको हो ? यसबारे अमेरिकासँग भएको छलफलमा विषयवस्तु कसरी अघि बढी रहेछन् भन्ने कुरा जनतालाई त के आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई समेत सूसूचित गरेनन् । परियोजना ल्याउनुभन्दा पहिले त्यसबारे गहीरो अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि देखिन्न… पुरा पढौ
चुहिने टपरी टाल्ने कि फाल्ने?
म प्राथमिक बिद्यालयमा पढदै गर्दा नेपालमा पञ्चायति ब्यबस्था किशोर उमेरको थियो। मेरो बाल मस्तिषमा पञ्चायति ब्यबस्था भनेको कुनै फलफुल वा अन्नको जात होला जस्तो लाग्दथ्यो। किनभने पञ्चयती ब्यबस्था नेपालको हावा-पानी र माटो सुहाउदो ब्यबस्था हो भनिथ्यो। किसानहरुको कुराकानी सुन्दा हावा-पानी र माटोको कुरा कुनै अन्न वा बिरुवा सँग सम्वन्धित हुन्थ्यो। "वर्ग समन्वय"को धरातलमा "हुकुम"बाट सन्चालित त्यो ब्यबस्था बयस्क उमेरमै अवसान भयो। ब्यबस्थाको त अवसान भयो तर पनि हावा, पानी र… पुरा पढौ
लीलबहादुर: शिवस्तुतिदेखि पद्मश्रीसम्म
नेपाली आख्यान साहित्यमा एक दर्बिलो स्थान ओगट्न सफल भएका, आजको मितिमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएका असमका लीलबहादुर क्षत्री बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन्। मुख्यत: आख्यानकारका रूपमा परिचित, चर्चित र समादृत भए तापनि क्षत्रीको साहित्य यात्राको थालनी भने कविता विधाबाट भएको हो। सन् १९४९ मा १६ वर्षको उमेरमा उनको पहिलो काव्यकृति 'शिव स्तुति' सिलाङबाट प्रकाशित हुन्छ। पछि सन् २००१ मा हाम्रोध्वनिको कविता विशेषाङ्कमा उनका कविताहरू प्रकाशित भए। जीवनका विभिन्न समयमा लेखेर छरपस्ट… पुरा पढौ
कसरी रोकिन्छ प्रतिभा पलायन ?
नागरिकका अपेक्षााप्रति राज्यको उदासिनताका कारण आम नागरिकमा छाउने नैराश्य, बाध्यता, विवशता, राज्यप्रतिको वितृष्णाको उपज हो प्रतिभा पलायन । एउटा नवयुवाले आफ्नो सुन्दर भविष्यको परिकल्पना आफ्नै देशमा किन गर्न सकिरहेको छैन ? यो मुलुकको समृद्धिमाथिको यक्ष प्रश्न हो । विश्वव्यापीकरण, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, ग्लोबल भिलेजको अवधारणा जस्ता विकासका आयामले समग्र विश्वलाई एकाकार गरिरहेको परिवेशमा उच्च गुणस्तरको शिक्षाको भोक, आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमता अनुरुपको रोजगारीको खोजी, अवसरको खोजी, आधुनिकता प्रतिको आकर्षणले उच्च… पुरा पढौ